माधव नेपाल निकट पत्रकारको लाजामर्दो गुनासो, थाहा पाउने सबै बने अचम्मित ! - Media Dabali
माधव नेपाल निकट पत्रकारको लाजामर्दो गुनासो, थाहा पाउने सबै बने अचम्मित !
काठमाडौं । सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपालनिकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा भएका सरकारी नियुक्ति र अवसरको बाँडफाँट विभेदपूर्ण भएको गुनासो गरेको छ।
बिहीबार बसेको समाजवादी प्रेस संगठनको सचिवालय बैठकले सञ्चार क्षेत्रको नियुक्तिमा कांग्रेसीकरण गरिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो।
बैठकपछि महासचिव भुपराज खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रमा कांग्रेसले एकलौटी नियुक्ति गरेकाले त्यसलाई सच्याउन पार्टीमार्फत माग गरेका छन्। यदि निर्णय नसच्याए प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि उक्त संगठनले दिएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यम र सञ्चार संस्थाहरुमा भएका नियुक्तिमा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको उक्त संगठनले गुनासो गरेको छ। मात्र नियुक्ति गरेर कांग्रेसीकरण गरिएको पनि समाजवादी संगठनको भनाइ छ ।
संगठनले एकलौटी अवसर वितरण र नियुक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै सरकारले सत्ता गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण दल र त्यससँग सम्बद्ध संगठनलाई गरेको अपमानजनक व्यवहार निन्दनीय रहेको जनाएको छ।
नेकपा ओली–प्रचण्डको ‘प्राइभेट कम्पनी’ होइन, चोचोमोचो चल्दैन : माधव नेपाल
प्रचण्डविरुद्ध निर्वाचन आयोगलाई केपी ओलीको पत्राचार, माधव नेपाललाई संकट !
बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल पनि तानिने, ओली निकट न्यायाधीश सुनुवाइ गर्दै
प्रचण्डले सिध्याइदिए माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य
माधव नेपालविनै एमाले चलाउँछु भन्ने ओली अहिले किन गले ?
शुक्रवार, बैशाख २४ २०७८११:४२:१७